» श्रमिक बनाउन रोकिएनन् ! बालबालिका ईट्टा भट्टामा
श्रमिक बनाउन रोकिएनन् ! बालबालिका ईट्टा भट्टामा
५ चैत्र २०७६, बुधबार १२:३२ प्रकाशित
चितवन – सरकारले १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कसैले लगाएको पाईएमा कानुन अनुसार सजायको पनि व्यवस्था गरेको छ । तर कतिपय कारखाना, होटल, यातायात क्षेत्रमा ग्रैहकानुनी रुपमा बालबालिका प्रयोग हुने नौलो घटना भने होइन । यस्तै बालबालिकाको प्रयोग इट्टाभट्टामा अत्याधिक रुपमा श्रममा लगाउने पाइएको छ । अधिकांश बालबालिकाका अभिभावक सोही ईट्टाभट्टामा काम गर्ने कारण पनि उनीहरु श्रम गर्न बाध्य भएका हुन । चितवनको राप्तीनगरपालिकाका इट्टाभट्टामा यस्ता बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाउने गरेको पाईएको छ ।
बालबालिकालाई ईटाँ बनाउने, चाङ लगाउने, ट्रयाक्टरमा लोड–अनलोड गर्ने जस्ता काममा बालबालिकाको प्रयोग भइरहेको छ । राप्तीनगरपालिका वडा नम्बर ९ लालपुरमा ६ वटा ईटाँ भट्टा रहेका छन् । यहांँ एउटा ईटाँ भट्टा मात्रै ३०जना बालबालिकाहरु श्रम बेच्न बाध्य छन् ।
भवानीपुर घर भएकी १३ वर्षकी रमना पासवा पनि लामो समयदेखि स्थानीय ईट्टा भट्टामा श्रम गर्न बाध्य छिन । आफूले पढ्न मन भएपनि गरीबीका कारण पढ्न नपाएको दुखेसो गरिन । आमाबाबुसंगै काम गर्न आएको उनी भन्छिन , ‘आमाबाबुसंग मलाई पढाउने, खानलाउने पैसा छैन त्यसैले दैनिक काम गर्नुपर्छ ।’उनी पीडा पोख्छिन । घरमा हुदाँ भने नजिकैको विद्यालयमा कहिलेकांँही पढ्न जाने गरेको उनले बताईन् ।
उनी जस्तै सर्लाही घर भएका रुपेश परियारको दुखेसो पनि उस्तै छ । उमेरले १४ वर्ष टेकेका उनी दुई वर्ष अघी देखि ईटाँ भट्टामा काम गर्दै आएको बताउंँछन । भट्टामा उनले बालुवा धुने, सुकाउने, ईटाँ फ्याक्ने जस्ता काम गर्ने बताए । पढ्न मन लागे पनि दिनभरीको थकानले पढ्न नसकेको उनको भनाई छ ।
रौटहटका १२ वर्षीय आकाश पासवान (नाम परिवर्तन) पनि आमाबाबुसंगै ईटाँ भट्टामा काम गर्दै आएका छन । ‘विद्यालय जान मन हुन्छ उनले भने तर के गर्ने , साहुले पढ्न नजाऊ भन्छ । ईटाँ सुकाउने, ईटाँ गाढामा ओसार्ने जस्ता काम गर्ने गरेको उनले बताए ।
हिउँद याम लाग्नेबित्तिकै भट्टामा काम गर्ने सिजन सुरु हुन्छ । श्रमिक अभावका कारण बालबालिकालाई कम ज्यालामा काम लगाउंँन पाइने भएकाले अधिकांश भट्टा सञ्चालक र ठेकेदारले बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गर्दै आएका छन । जसका कारण हाल सम्म पनि नगरपालिकाले कुनै पनि ईटाँ भट्टालाई बालश्रम मुक्त घोषणा गर्न सकेको छैन ।
नगरपालिकाले ईटाँ भट्टाका काम गर्न आउने मजदुरहरुका छोराछोरीलाई पढ्नको लागि विद्यालयको व्यवस्था गरेको बताउंँछन्, राप्तीनगरपालिकाको उपप्रमुख ईमानसिङ्ग मोक्तान । बालबालिकाहरु आफै नै विद्यालय नजाने गरेको उनी ठोकुवा गर्छन । ‘अनुगमन गर्न जादाँ बालश्रमिक भेटिदैन, उनले भने, भेटिए हामी सञ्चालकलाई कारवाही गछौँ ।’
कानुनमा के सजाय छ त ??
सरकारले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाए १ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले १० वर्षभित्रमा नेपालबाट सबै प्रकारका बालश्रम पुर्णरुपमा निवारण गरी मुलुकलाई बालश्रम रहित बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर यो कागजमा मात्र सिमीत छ व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएको माथिल्लो उदाहरणले देखाउंँछ । राष्ट्रिय गुरु योजनामा २०७९ सम्ममा निकृष्ट प्रकारको तथा शोषणयुक्त बालश्रम निवारण गर्ने र २०८२ सालसम्ममा सबै किसिमका बालश्रम निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर यसलाई न्यूनिकरण र नियन्त्रण गर्न भने ठोस कदम चालेको भने पाइदैन ।